11-01-2016, 06:59 AM ကျွန်တော် နှင့် ခဏတာကြုံတွေ့မှုများ အပိုင်း (၁)
Nyi Thu Ya စာရေးဆရာမဟုတ်တော့ မိတ်ဆွေတို့ သည်းခံပီးဖက်ပေးကြပါဗျာ။
ကာမအတွေ့အကြုံကတော့များသားဗျို့ များတယ်ဆိုလို့လည်း စိုင်းစိုင်း တို့လိုအသက် ၄၀ ကျော် လူပျိုသိုးကြီးမဟုတ်ဘူးဗျ ကျုပ်အသက်က ၁၈ ။အံ့သြသွားသလား။ ထားပါ လိုရင်းဆက်ကြရအောင်။
ပထမဆုံးအကြိမ်ကတော့ ၈တန်းလောက်မှာဗျ။ ကိုယ်တွေကအဲ့အချိန်မှာစာအုပ်တွေဖက် ဇာတ်ကားတွေကြည့်ပီးလက်တည့်ကစမ်းချင်နေပီကို ။ ကျောင်းမှာကျုပ်ကအကောင် အခြားအကောင်မဟုတ်ဘူး ကျောင်အုပ်ဆရာမရဲ့တူ အဲ့တော့သူငယ်ချင်းအချင်းချင်းကပါလေးစားကြတာပေါ့ဗျာ စာအုပ်အသစ်လေးရလာလည်းကျုပ်ကအရင်ဖက်ရတာ အဲ့တော့ဒီကကောင်က စာအုပ်ထဲကအတိုင်းဇာတ်လမ်းတွေထွင်ချင်နေပီလေ အဲ့မှာခက်တာကရည်းစားကမရှိဘူး အေးရော ??
အဲ့တာနက် ပေါချောင်ကောင်း ဂွင်လေးတွေချောင်းရတာပေါ့ဗျာ ၈တန်းနှစ် ပထမကျောင်စတတ်တဲ့အပတ်မှာပဲကျုပ်တို့အခန်းကို ကောင်းမလေးအသစ်နှစ်ယောက်ပြောင်းလာတယ်ဗျ နှစ်ယောက်စလုံးကိတ်တာမှ ကျောင်းစိမ်းထဘီလေးတွေကိုနောက်ကနေတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင် မို့မောက်နေတဲ့တင်တွေကလက်ယက်ခေါ်နေသယောင်ကိုကိတ်တာဗျို့ ဒီကကောင်ကလည်းဘယ်ရမလဲ ဒါမျိုးဆိုအလွတ်မပေးဘူး ချောင်းတာမှစာတောင်လိုက်မရေးနိုင်တဲ့အဖြစ် ဘယ်ဒီလောက်ကိတ်နေမှတော့ကိုယ်တွေကကြံပီလေ ဒါနဲ့ သူတို့နာမည်က တယောက်က နဒီ တဲ့ အဲ့စော်လေးကအရပ်ကပုပုလုံးလုံးနဲ့ကိတ်တာဗျ နောက်တယောက်က ဆောင်း တဲ့ လှလိုက်တဲ့နာမည်တွေဗျာ နာမည်ကိုက sexy ကျတယ်ဆိုတာဒါမျိုး။
အဲကံကကောင်းချင်တော့ ဆောင်း ဆိုတဲ့ကောင်မလေးက ကျုပ်အိမ်ကကျူရှင်ဝိုင်းမှာလာတတ်ပါလေရော ကျောင်းမှာတင်မဟုတ်အိမ်မှာပါမြင်နေရတော့ ဒီကကောင်ကထန်ပီလေ နဒီ ဆိုတဲ့တယောက်ကရောလို့မမေးနဲ့ သူနဲ့မနက်အသင်းလုပ်ရင်အတူတူ ဘုရားပန်းအိုးတတ်လဲရင်းသူအောက်ကနေပေးတဲ့သောက်တော်ရေခွက်ကျုပ်ကမြင်တာမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်အကြံနက်ကိုယ်လေ ?? လှလိုက်တဲ့စနေနှစ်ခိုင် ညတိုင်းသာကိုင်အိပ်ရရင်ကောင်းလိုက်မယ့်ဖြစ်ချင်း ဒီလိုနဲ့ချောင်းလာလိုက်တာ ကျောင်းဖွင့်တာတစ်လတိတိပြည့်တဲ့နေ့ အဲ့နေ့ကမိုးတွေကိုဆွေလို့ ဇူလိုင် ၁၉ ရောက်နေသလိုပဲစိတ်ထဲဝမ်းနည်းနည်းနဲ့ အသင်းကျလို့ကျောင်းကိုအစောလာ နဒီ ကလည်းအသင်းအတူတူဆိုတော့သူကလည်းကျုပ်ရောက်ပီးသိပ်မကြာဘူး သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ရောက်နဲ့ရောက်လာပြန်ရော အဲ့မှာဇာတ်လမ်းကစတာဗျို့ ကျုပ်ကလည်းရေခပ်ပေး သူတို့ကလည်းဘုရားပန်းလဲပေါ့ ဘုရားပန်းလဲ လဲပီးရော နဒီ့သူငယ်ချင်းကဟိုဖက်ခန်းကသူ့ကောင်းလေးဆီသွားချိန်းတွေ့ရောဗျို့ ကျုပ်နဲ့နဒီနဲ့ နှစ်ယောက်ထဲကျန်နေခဲ့တာပေါ့ဗျာ အဲ့မှာဒီကကိုရွှေချောက ဉာဏ်နီဉာဏ်နက် တွေထုပ်ပီလေ သူ့နားလေးကပ်လိုက်လိုက်စလိုက်နဲ့ သူကကျုပ်လိုက်ရိုက်ရော ကျုပ်ကလည်းဘယ်ရမလဲ မပြေးဘဲ သူ့လက်ကိုချုပ်ပီးတော့ သူ့ကိုယ်ကိုသိုင်းလိုက်တော့ သူ့ဖင်က ကျုပ်ညီလေးကိုလာနိုးနေသလိုဖြစ်နေတာပေါ့ ကျုပ်ကလည်းမလွှတ်ဘူး အခွင့်အရေးကနှစ်ခါမရဘူးလေ သူကရုံးလေကျုပ်ညီလေးနဲ့ပွတ်လေဆိုတော့ ဟိုကောင်ကဘယ်ရမလဲ ငေါက်ကနဲကိုထလာတာ ဟိုက်! အဲ့ဒါမှဒုက္ခ ဒီနေ့အတွင်းခံကပါမလာဘူး "သူရ နင်ဗလရှိတယ်ဆိုပီးအနိုင်မကျင့်နဲ့နော် "
"နဒီ နင်ပဲငါ့ကိုလိုက်ရိုက်တာလေ ကဲအခုရိုက်နိုင်သေးလား နင်ရုန်းနိုင်ရင်ရုန်းဟာ" ဒီကအကြံနဲ့ အဲ့တာကိုဟိုမရွှေချောက ရုန်းလေတော့ သူ့ဖင်ကြားထဲကို ကျုပ်ညီလေးကကွက်တိကိုထောက်မိပါလေရော ကောင်မလေးတချက်တွန့်သွားတယ်ဗျ "သူရ လွှတ်ဟာ နင်အနိုင်မကျင့်နဲ့"
ဒီကကောင်လည်းဘယ်ရမလဲ ဂွင်ကကောင်းနေပီဆိုတော့ "မလွှတ်ဘူးဟာ နင်ရုန်းနိုင်ရင်ရုန်း "
ညီလေးကလည်းအမြှင့်ဆုံးရောက်နေပီ သူကရုန်းလေပိုထိုးမိလေပဲ နောက်တော့ကြောက်ကလည်းကြောက်ပီးလွှတ်ပေးလိုက်မိတယ်ဗျ အဲ့မှာပြဿနာက ကျုပ်ကျောင်းစိမ်းပုဆိုးက ကွက်နေပီ သူ့ထဘီလေးကြည့်လိုက်တော့လဲ တင်ပါးနှစ်ခုကြားထဲကနေရာလေးမှာ အကွက်သေးသေးလေး ဒီလိုနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းပြန်ရောက်လာရော နှစ်ယောက်သားပုံမှန်အတိုင်းပဲပေါ့ စကားပြောလိုက်ရီလိုက်နဲ့ ကျုပ်သတိထားမိတာတစ်ခုက တချက်တချက်သူကခိုးခိုးပီး ကျုပ်ကိုမျက်စောင်းထိုးနေတာဗျ ကျုပ်လဲလန့်သွားတာပေါ့ ငါလုပ်တာများမိသွားပီလားပေါ့လေ အတွေးတွေနဲ့နေ့တစ်နေ့ကုန်ဆုံးသွားတာပေါ့ အဲ့ကနောက်ကိုသူ့ကိုမှန်းမှန်းပီးတော့ အပီထုတော့တာပေါ့ဗျာ ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့ရောက်တော့ ကျုပ်ကျောင်းကိုစောစောရောက်နေတယ်ဗျ ကိုယ့်အကြံနဲ့ကိုယ်ကိုး ရောက်တဲ့အကြောင်းအရင်းကလည်းအဲ့နေ့ကအသင်းနေ့ သူလည်းသူ့သူငယ်ချင်းနဲ့ခဏနေတော့ရောက်လာပါလေရော အဲ့မှာ ကျုပ်နဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းဘဲနဲ့ကစော်ကိုဘယ်လိုကိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောနေတာဗျို့ ကျုပ်ကလည်းအကြံနဲ့ဆိုတော့အဲ့ကောင်ကိုမြှောက်ပေးလိုက်တာ မောင်မင်းကြီးသားက သူ့စော်ကိုဟိုဖက်အခန်းခေါ်သွားပါလေရော အဲ့မှာ နဒီ ကသူတို့ဘာတွေပြောကြလည်းချောင်းကြည့်ရအောင်တဲ့ ဒီနေ့မှဘာစိတ်ကူးပေါက်တယ်မသိ အခန်းချင်းကကပ်ရပ်ဆိုတော့ နဒီ့ ခုံဘေးကနံရံမှာကအပေါက်နှစ်ပေါက်ရှိတယ်ဗျ ကျုပ်ကလည်းအင်းချောင်းပေါ့ ဆိုတော့ အပေါက်လေးကသေးသေးလေးတွေ ဖြစ်ချင်တော့ အပေါ်တစ်ပေါက်အောက်တစ်ပေါက်တန်းနေတာ အဲ့တာနဲ့ကျုပ်လည်းသူ့ခုန်ဘက်သွားပီး "နင်ကအောက်ကအပေါက်ကချောင်း ငါကအပေါ်ကချေင်းမယ် "
သူကအပေါက်ကိုကုန်းပီးချောင်းနေတာ ကျုပ်ကလည်းအစကမသိဘူး ချောင်းနေတာပေါ့ ဟိုကောင်ကလည်းဒီကမြှောက်ပေးလိုက်တာကို ညံ့လိုက်တာခုထိစကားပြောနေတုန်း ညောင်းလို့ ခုံပေါ်ကိုဒူးထောက်လိုက်တော့ မရွှေချော ကဘာတွေစိတ်ဝင်စားတယ်မသိ အပီအပြင်ကိုကုန်းပီးချောင်းနေတာ ကိုယ်ကဒူးထောက်ထားတာဆိုတော့ သူ့ဖင်နဲ့ကတန်းနေတာကို အသာလေးရွေ့သလိုနဲ့ သူ့ဖင်လေးနဲ့ကပ်ပေးလိုက်တော့ "ဟာ ရှေ့မတိုးနဲ့လေ ဒီမှာနဖူးနဲ့စောင့်မိလိမ့်မယ် " "သြော်အေးအေး " အေးအေးသာပြောတာနောက်မဆုတ်ဘူး ဂွင်တွေ့ပီလေ ??
ခဏနေတော့ညီလေးကဇာတိပြလာပါလေရော ကျုပ် ကလည်းစိတ်ကထလာပီလေ ထဆို ဟိုအတွဲကလည်းကျုပ်မြှောက်ပေးလိုက်သလိုဟိုက နှုတ်ခမ်းချင်း kissing ဆွဲပီးဟိုငနာကနို့ကိုအတင်းနှိုက်နေပီလေ ညီလေးကချက်ချင်းထွားလာတော့ ကိုယ်ကလည်းသနားပြီး အသာလေးရှေ့ကိုနှစ်ချက်လောက်ဆင့်ဆောင့်လိုက်တော့ နဒီကဘာမှမပြောတော့ဘူးဗျ ဘာမှသာမပြောတာ ကျုပ်ညီလေးက သူ့ဖင်ကြားထဲရောက်နေပီ ကိုယ်ကလည်းဒါမျိုးစောင့်နေတာဆိုတော့ လက်လွှတ်မခံဘူး "သူရ "
ကျုပ်ဖြင့်လန့်သွားတာပဲ ငါလုပ်တာများသိသွားတာလားပေါ့ " သူရ ငါ မကြည့်ချင်တော့ဘူးဟာ "
ဟာ အဲ့ဒါမှဒုက္ခ "နင်ကလည်းပီးအောင်ကြည့်လိုက်ပါ "
ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ် ရှုပ်နေတာဆိုတော့ အခုမှရှေ့ကြည့်မိတယ် ဟိုငနာကနို့အတင်းလှန်စို့နေတာကိုး သြော် ဒါကြောင့်မကြည့်ချင်တာကိုး "နင်ကလည်း သူတို့ကဘာတွေလုပ်နေမှန်းလဲမသိဘူး ငါမကြည့်ချင်တော့ဘူးဟာ "
မကြည့်ချင်တော့ဘူးသာပြောနေတာ မျက်လုံးကအပေါက်ကခွာတာမဟုတ် "နင်ကလည်းပီးအောင်ကြည့်ပါ စကားမများနဲ့ကြားသွားမယ် ဒါမျိုးကကြည့်ရခဲတယ်ဟ "
ပြောပီးကိုယ်ကအသာလေးကော့ကော့ပီးဆောင့်တာပေါ့ နဒီ ပြန်စာမလာပါဘူးဆိုပီး တချက်ရိုးလိုက်တော့မရွှေချောက ဖီးလ်တွေတတ်နေပီနဲ့တူပါတယ် တအားကိုအာရုံစိုက်ပီးချောင်းနေတာ မိန်းမ်ွများခက်တယ် ဒါနဲ့များသူကမကြည့်ချင်ဘူးပြောသေး ကိုယ်တွေကချောင်းကိုမချောင်းနိုင်တော့တာ ကိုယ့်လုပ်ကွက်နဲ့ကိုယ်ဟုတ်နေပီလေ အဲ့မှာ နဒီက နှစ်ချက် သုံးချက်လောက် နောက်ကိုပြန်ပီးဖင်လေးကော့ပေးတယ်ဗျ ဟ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲဒီကကောင်ကအကြိုက်ပေါ့ နဒီ့အခြေအနေကိုလဲရိတ်မိတော့ "နဒီ ငါလက်ညောင်းလို့ နင့်ပေါ်ခဏတင်မယ်နော် "
အမှန်ကလက်မညောင်းဘူး သိတယ်မို့လား ဒေါ့ကီ လေ ကိုယ်တွေကအဲ့စတိုင်အတော်ကြိုက် သူ့ခါးသေးသေးလေးကိုလက်လေးနှစ်ဖက်နဲ့အသာကိုင် ပီးတော့ အသာလေးနောက်ြပန်ဆွဲ ညီလေးကိုကော့ကော့ပီးထည့်လိုက်တာ ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကြားကပုဆိုးနဲ့ထဘီသာမရှိဘူးဆိုရင် သိပ်ကောင်းလိုက်မယ့်ဖြစ်ချင်းဗျာ ကောင်မလေးကလည်းအလိုက်သိ နောက်ကိုပြန်ကော့ကော့ပေး သူရတို့ကတော့ မိုရတဲ့မျက်နှာနဲ့ မျက်လုံးမှိတ်ပီးတော့သူ့ဖင်ကြားလေးထဲကိုကျုပ်ညီလေးနဲ့ နှဲ့နှဲ့ ပီးဆောင့်နေတာပေါ့ တအောင့်လောက်ြကာတော့ နဒီ ကတွန့်ကနဲ တွန့်ကနဲ သုံးခါလောက်ဖြစ်တော့ဒီကသိပီလေ ကောင်မလေးပီးသွားပီပေါ့ ခက်တာကကျုပ်ကလွယ်လွယ်နဲ့မပီးတတ်ဘူး သူ့ထဘီလေးကသေချာကြည့်မိတော့မှ ထဘီအသားလေးကခွက်နေပီးဖင်လေးနှစ်လုံးကိုထဘီမပါပဲကြည့်နေရသလို အဲ့ကြားထဲမှာသကောင့်သားက နဒီ့ ရဲ့ စအို အဝ အဆုံးရဲ့အောက် နဒီ့ အဖုတ်သားနုနုလေးမှာထောက်မိနေတယ်ဆွာ အထိအတွေ့နဲ့သိနေပီလေ ကောင်မလေးကပီးသာသွားတယ် ကုန်းလျက်ပဲ အခြေအနေကောင်းတယ်ပေါ့ ဒီကလည်းဆက်တိုက်ကိုဆောင့်လိုက်တာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းဗျ အောက်ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ နဒီ့ ဖင်လုံးလုံးလေးကကျုပ်ကို လိုးလိုး နဲ့တောင်းဆိုနေသလိုဖူးဖောင်းပီး ကြားထဲကညီလေးကပီးသွားပါလေရော အဲ့တာနဲ့ရှေ့ကြည့်လိုက်တော့ ဟိုသကောင့်သားက ဘော်လီတောင်ပြန်ဝတ်ပေးနေပီ အဲ့တာနဲ့ကျုပ်လဲနောက်ကိုအသာဆုတ် တော့ နဒီလဲအခုမှသတိပြန်ဝင်လာတယ်ထင်ပါတယ် သူလဲနောက်ကိုပြန်ဆုတ် သူ့ဖင်လေးကိုကြည့်လိုက်တော့ ဖင်လုံးလေးနှစ်ခုကြားမှာထဘီစလေးညှပ်နေတယ်ဗျ လှလိုက်တဲ့ဖင်လုံးလေးတွေဗျာ ခုထိမျက်လုံးထဲကမထွက်ဘူး သေချာလဲကြည့်လိုက်တော့ ထဘီမှာ နဒီ့ အဖုတ်လေးကထွက်တဲ့အရည်လေးတွေက ဟိုးတနေ့ကထက်ပိုကွက်နေတယ်ဗျ အဲ့ဒါနဲ့ "နဒီ နင့် ထဘီပြင်ဝတ်လိုက်အုံးနောက်မှာပေနေတယ် "
"သြော် အင်းအင်း "
ကျုပ်လဲပြောသာပြောရတာ ကြောက်ကြောက်နဲ့ သူကလည်းရိတ်မိပါတယ်နဲ့ တူတယ် "သူရ နင်ရေသွားခပ်တော့လေ စုစုလည်းပြန်လာတော့မှာ ဘုရားပန်းလဲရအောင် " "အင်း "
"သြော် ဒါနဲ့ နင်ဒီနေ့အရမ်းလှတယ်သိလား"
"နင်ကလည်းဟာ" ဟိုက် ! ဘာတွေးတယ်မသိ ကျုပ်ပြောတာကရိုးရိုး မယ်မင်းကြီးမက ရှက်ပီးတော့ခေါင်းအောက်ငုံ့ပြီး ဆံပင်တောင်သက်လိုက်သေးတယ် "သြော် နဒီ ဟိုကောင်တွေလာရင် အခန်းရှေ့ကိုတံမြတ်စီးလှဲထားအုံးလို့ပြောလိုက်နော် "
"အေးအေး နင်ရေမြန်မြန်ခပ်ခဲ့အုံး "
အဲ့ ဟုတ် ကအတော်ထိတယ်ဗျ ဝိုင်းနေတဲ့သူ့မျက်လုံးလေးကို ပင့်ကြည့်ပီး " ဘာ ဟုတ် လဲ" ဟိဟိ အဲ့အကြည့်လေးကဒီရင်မှာစွဲခဲ့ရတဲ့ ပုံရိတ်တခုဆိုရင်မမှားပါဘူး ညနေပိုင်းကျူရှင်လာတတ်တဲ့ ဆောင်း ကိုတောင်သိပ်မကြည့်ဖြစ်တော့ဘူးဗျ ကျုပ် ရင်ထဲမှာ နဒီ ရောက်နေပီလေ အဲ့ညကတော့အတွေးများစွာနဲ့ပေါ့ နဒီ ကျုပ်ကိုတကယ်ကြွေနေပီပေါ့ ကွကိုယ်အထင်ကြီးပီးဆုံးဖြတ်ချက်တခုချလိုက်တာ နောက်နေ့ဖွင့်ပြောမယ် လို့ နောက်နေ့လဲရောက်ရော နဒီကအရင်စကားလာပြောတယ်ဗျ ကျုပ်ကမုန့်စားဆင်းရင်အပြင်သိပ်ထွက်တာမဟုတ်ဘူး ကျုပ်တို့အခန်းနဲ့မျက်စောင်းထိုးက တမာအောက်ကခုံတန်းလေးမှာထိုင်ပီးအမေထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ပဲနို့ဗူးသောက်နေတာဗျ "ဟဲ့ သူရ နင်ဘောလုံးသွားမကန်ဘူးလား "
"နင်ကပဲနို့ကြိုက်လား" ကျုပ်လေအဲ့အချိန်မှာ ပဲနို့မကြိုက်ဘူး နင့်နို့ကြုိကိုက်တာဆိုပီး ကုန်းစို့ လိုက်ချင်တာမနဲထိန်းထားရတယ် "အင်း "
" နင်စိတ်မဆိုးရဘူးနော် "
" အေးပါ နင်ကလည်းပြောမှာသာပြောစမ်းပါ"
" ငါ နင့် ကိုလေ ကျောင်းကိုစရောက်ကတည်းကချစ်မိနေတာ "
ဟုတ်တာမဟုတ်တာအသာထား ကိုယ့်ဖက်ပါဖို့အရေးပဲ ဒါကမဲဆွယ်ကာလလေ " ငါ နင် စိတ်ဆိုးသွားမှာကြောက်လုိ့ဖွင့်မပြောတာဟ အခုကနင့်ကိုအရမ်းချစ်လို့အရဲစွန့်ပြောလိုက်တာပါ "
ဒီလိုနဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြတယ် ဆိုပါတော့ဗျာ အဲ့မှာခင်ဗျားတုိ့စောင့်စားနေတဲ့အခန်းလာပီဗျာ ပြဿနာကကျုပ်တို့မြို့ကနယ်မြို့လေး ရုပ်ရှင်ရုံကမရှိဘူး ဒါပေမဲ့ဂေါက်ကွင်းတော့ရှိတယ်ဗျ ကျုပ်လဲစော်ရပီဆိုတော့နေရာ
တွေ့ပီဗျာ အမှန်အကန်လေး ချုံလေးကအလည်ထဲကကွက်ပီးခွက်နေတာ အမယ်အဲ့ခွက်နေတဲ့နေရာလေးက အတွဲတွေရဲ့ကျက်စားရာနယ်မြေထင်ပါရဲ့ တလင်းလေးကပြောင်လို့ ကျုပ်ကသူများသာမြှောက်ပေးတတ်တာ ကျုပ်ကိုယ်တိုင်အဟုတ်လုပ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ ရင်ထဲကကျလိကျလိနဲ့ဗျ ကံကောင်းတာက နဒီ ကငါတို့နှစ်ယောက်ဖြစ်နေတာကိုဘယ်သူမှမသိစေချင်ဘူး ဆိုတော့ ok ပီလေ ကျုပ်နဲ့အမြဲတွဲတဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်ဗျ သူကတော့သိတာပေါ့ဗျာ
တစ်နေ့ ကျုပ်ကကျောင်းပိတ်လို့အိမ်မှာရှိနေတုန်း ဖုန်းနံပတ်အသစ်ကျုပ်ဖုန်းထဲဝင်လာတယ်ဗျ အဲ့တာနဲ့ကောက်ကိုင်လိုက်တော့ မျှော်လင့်မထားပဲ ကျုပ်ချစ်သူနဒီဖြစ်နေတာဗျို့ ကျုပ်ကလွမ်းတယ်ဘာညာပေါ့လေ
တွေ့ရအောင်လို့ ဇွတ်ပြောတော့ နောက်အပတ် တနင်္ဂနွေ နေ့ နေ့လည် ၁ နာရီတွေ့မယ်တဲ့ ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ ကျုပ်အကြံထုပ်ရတော့တာပေါ့ "ဒီလိုပဲဟာ တွေ့ချင်လို့ တစ်နေရာရာသွားမယ်လေ "
"အင်း " " နဒီရအောင်တော့ထွက်ခဲ့ပါဟာနော် "
" ကို ကလည်းစိတ်ချအဲ့နေ့ကရတယ်"
ကျုပ်ပျော်ပီလေ ပျော်လိုက်တာမှဗျာ မျောက်အုန်းသီးရထားသလိုပဲ ဂနာမငြိမ်ဘူး ဟိုနားသွားထိုင်လိုက်ဒီနားသွားထိုင်လိုက်နဲ့ လာပီ နောက်အပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ခင်ဗျားတို့ဒါစောင့်တာမလား ကျုပ်လည်းအဲ့တုန်းက အဲ့နေ့ကိုဝုန်းဆိုရောက်ပလိုက်ချင်တာဗျို့ နေ့လည် ၁နာရီ ထိုးနေပီ နဒီအိမ်ရှေ့ကနေကျုပ်စက်ဘီးလေးရပ်ပီးစောင့်နေတာဗျ မရွှေချောကအလှတွေပြင်တာမပီးသေးဘူးထင်ပါတယ် နာရီငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ ၁ နာရီ ၁၅ မိနစ် ဟောလာပါပီ ကျုပ်ရဲ့ရွှေနတ်သမီးလေးနဒီ လှလိုက်တာဗျာ ပြောမနေပါနဲ့ အလေးကဝင်းပါတယ်ဆို ကချင် အင်္ကျီ နဲ့ ထဘီလေး အနက်ရောင်လေးဆိုတော့ အသားလေးကပိုပီးဝင်းနေတာပေါ့ဗျာ " နဒီ အရမ်းလှတယ် "
" အွန်း ပီးမှပြော လာသွားမယ် အိမ်နားကဟာတွေမြင်သွားမှာစိုးလို့ "
အဲ့တာနဲ့ စက်ဘီး လေးနဲ့သူ့ကိုတင်ပီး ဂေါက်ကွင်းထဲကနေရာလေးဆီကို ဒီကကောင်ကအပီနှင်းပီလေ ဟဲဟဲ သိတယ်မို့လား ကိုယ့်အကြံနဲ့ကိုယ်လေ " နဒီ ထိုင်လေ နေရာကကျဉ်းတယ် ကို့ ပေါင်ပေါ်ထိုင် ကို့ချစ်သူလေး အလှတွေပျက်သွားမှာစုိးလို့ "
တင်ပျင်ခွေထိုင်ထားတဲ့ကျုပ်ရင်ခွင်ထဲကိုဝင်လာတဲ့ ကိုယ်လုံးကျစ်ကျစ်လေးကိုထိလိုက်တာနဲ့တင် ညီလေးကထလာပါလေရော " ကို့ ချစ်သူလေးက နေ့တိုင်းကိုလှနေတာပဲ ချွတ်စ်.... "
တစ်မျိုးမထင်နဲ့ ပါးကိုနမ်းလိုက်တဲ့အသံ " ကို နဒီ့ ကိုတကယ်ချစ်လားဟင်"
" ချစ်တာပေါ့ နဒီ ရဲ့ကိုတို့ကြီးလာရင်လက်ထပ်ကြမယ်နော် "
နဲနဲပြင်လိုက်ပီး နဒီ့ ရဲ့ပန်းရောင်လေးသန်းနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို ငုံ့ပြီးတော့ kissing စဆွဲလိုက်တာပေါ့ဗျာ ပထမတော့သူမနေတတ်ဘူးနဲ့တူတယ် " နဒီ မျက်လုံးမှိတ်ထားနော် "
စကားတော့ပြန်မပြောဘူးဗျ အသာလေးရှိုးလိုက်တော့ သနပ်ခါးလိမ်းထားတဲ့ပါးပြင်ဖောင်းဖောင်းလေးက သိသိသာသာလေး ချွေးလေးတွေထွက်ပီး ရဲနေပီဗျ ကောင်မလေးတော့ရှက်နေပီနက်တူတယ် kissing ဆွဲနေရင်းကနေ အက်ျင်္ီလေးပေါ်ကနေ သူ့ရဲ့နို့လုံးလုံးလေးတွေကိုအုပ်ကိုင်လိုက်တော့ တချက်တော့တွန့်သွားတယ်ဗျ ပါးစပ်က မအားလေတော့ ဘာမှတော့မပြောဘူး နို့လေးတွေကတင်းတင်းလေးနဲ့လုံးလုံးလေးဗျာ ကိုင်လို့ကောင်းလိုက်တဲ့အပျိုနို့ ကျုပ်လဲမရဲတရဲနဲ့ နို့လေးကိုအသာလေးညစ်လိုက်တော့ သူ့လက်လေးနဲ့လာကိုင်တယ်ဗျ သဘောက မလုပ်နဲ့ပေါ့ နှုတ်ခမ်းချင်းတောင်ခွာလိုက်တယ် " ကို အသက်ရှုကျပ်လာပီ " " အင်းအင်း " ခဏခွာပြီးတော့ ကျုပ်သူ့မျက်လုံးကိုသေချာကြည့်လိုက်တယ်ဗျ ရှက်ပြုံးလေးပြုံးပြတဲ့သူ့အပြုံးလေးကိုကျုပ်အခုထိကို မျက်လုံးထဲကမထွက်တာအမှန်ပါဗျာ ကျုပ်လဲဘယ်ရမလဲ အချိန်ကုန်မခံဘူး ပြန်ပီး kissing ဆွဲလိုက်တယ် သူ့ကလဲအလိုက်သင့်လေးသူ့လျှာလေးနဲ့ ပြန်ကစားတယ်ဗျ အုပ်ကိုင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ နို့လေးကို ခပ်ဆက်ဆက်လေးညှစ်လိုက်တော့ နဒီ ကော့တတ်လာတယ်ဗျ သေချာပီ ကောင်မလေး ဖီလ်တွေတတ်နေပီ ok ကိုယ်ဆင်တဲ့အကွက်ထဲဝင်လာပီလေ နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းနေတာကိုခဏရပ်ပြီးတော့ သူ့ရဲ့လည်တိုင်ဖွေးဖွေးလေးကိုနမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာ " အာ့ ကို့ ယားတယ် မလုပ်နဲ့ "
ရပ်မယ်ထင်လားဒီကကောင်ကဈန်ဝင်နေပြီလေ ဘယ်ရပ်မလဲ နှုတ်ခမ်းလေးကိုပြန်စုတ်လိုက်တာပေါ့ ဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘူးလေ ဟဟ အပိုင်ပဲ နဒီ့နို့လေးပေါ်တင်ထားတဲ့ကျုပ်ရဲ့လက်ကိုနဲနဲကစားပေးရတော့မယ် ဗျ အင်္ကျီကြယ်သီးလေးတွေကိုသူမသိအောင်အသာချွတ်နေတာ အကုန်လဲကျွတ်သွားရော နို့လေးပေါ်ကိုလက်ပြန်တင်လိုက်တယ်ဗျ တခုခံစားရတာက နို့လေးရဲ့အလယ်လောက်မှာခုခုလေးတစ်ခုဖြစ်နေတာဗျ ကျုပ်သိလိုက်ပီလေ နို့သီးလေးထောင်နေပြီပေါ့ " နဒီ ကို့ ကိုအတွင်းခံအင်္ကျီချွတ်ပေးပါလားဟင် " " ဟာ ကိုကလည်းရှက်ပါတယ်ဆို "
" လုပ်ပါနဒီရယ် ကို တစ်ခါလောက်ကိုင်ကြည့်ချင်လို့ပါ " " ကို ကလည်းမဆိုးနဲ့ကွာ ဒီမှာရှက်ပါတယ်ဆို "
" လုပ်ပါ ကို ပြန်ဝတ်ပေးမယ်နော် ခဏလေးပဲနော် "
" အာ့ဆို ပြန်ဝတ်ပေးရမှာနော် "
" အင်းဝတ်ပေးမယ် "
ရင်လေးကိုကော့ပြီးအတွင်းခံချွတ်နေတဲ့ပုံကတကယ့် sexy မော်ဒယ်အတိုင်းပဲဗျာ " နဒီ့ နို့လေးတွေကလှလိုက်တာ "
" ဟာ ရှက်ပါတယ်ဆို "
" စို့မယ်နော် "
သူပြန်ပြောတဲ့စကားကိုမစောင့်နိုင်ရအောင်ကိုလုံးဝင်းပီး တင်းတင်းလေးဖြစ်နေတဲ့နို့လေးတွေက ကျုပ်စိတ်ကိုတကယ်ရိုင်းစေတယ်ဗျာ ကောင်းလိုက်တဲ့နို့ ဘာအရသာမှပဲမရှိပဲ စို့ရတာကိုကကောင်းနေတာဗျာ ကျုပ်ညီလေးကတော့ဘယ်ပြောကောင်းမလဲဗျာ အစွမ်းကုန်ကိုတောင်နေတာဗျို့ ကျုပ်ရင်ထဲလဲဝင်ကြည့်အုံး တဒုံးဒုံးတဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ ကုလားဘုရားပွဲလှည့်နေသလိုပဲဗျာ ကျုပ်ကလက်တစ်ဖက်ပဲအားတာ တဖက်ကသူ့ကိုပွေ့ထားရသေးတယ်လေ အောက်ကိုမသိမသာရှိုးလိုက်တော့ ထဘီဆိုတော့အောက်ကနိုက်မရ အဲ့ဒါနဲ့ သူ့ထဘီလေးကိုအသာလေးဆွဲဆွဲဖြေနေတာ တင်းလိုက်တဲ့ထဘီ ဘယ်လိုမှမရဘူး နဒီရိတ်မိသွားတယ်နဲ့တူတယ် ခါးလေးကိုအသာကော့ပေးတယ်ဗျ အဲ့တာမှဖြေရတာ သွသူဖီလ်းတတ်လို့ကော့တာလား ကျုပ်ကိုပေးချင်လို့ကော့တာလားတော့ သူကိုယ်တိုင်ကလွှဲပီး ခင်ဗျားတို့လည်းမသိနိုင်ဘူး ကျုပ်လည်းမသိဘူး အဓိကကကျွတ်သွားဖို့လေ အောက်ခံဘောင်ဘီလေးကပန်းရောင်လေးဝတ်ထားတာဗျ ဝင်းဝါနေတဲ့အသားလေးဘေးမှာ ပန်းရောင်နဲ့အနက်ရောင်က နာမည်ကျော်ပန်ချီစရာတောင်အရှုံးပေးရလောက်တဲ့မြင်က်ွင်း အားနေတဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့အသာလေးသူ့အဖုတ်လေးကိုစမ်းလိုက်တယ်ဗျ အထိအတွေ့နဲ့တင်ညီလေးကပြီးချင်သလိုသလိုဖြစ်လာရော ဘယ်ရမလဲ ကိုယ်တွေကသေးပေါက်ရင်းလေ့ကျင့်ထားတာဆိုတော့ ဒီလောက်ကတော့အပျော့ အဖုတ်လေးကို သူ့ရဲ့ပင်တီပေါ်ကနေကိုင်ရတာကိုကအရသာတစ်မျိုး တစ်ဆင့်တတ်ပီလေ လက်လေးကိုအသာပင်တီလေးထဲကိုနှိုက်ဖို့လုပ်ရတော့တာပေါ့ ပင်တီလေးအထဲကိုလက်တစ်ဝက်လောက်ရောက်သွားတော့ သူကကျုပ်လက်ကိုလာကိုင်တယ်ဗျ " ကို အဲ့တာတော့မလုပ်နဲ့လေနော် "
" နဒီ ကလည်းခဏလေးပါနော် ကို့ကိုချစ်တယ်မို့လား "
" အွန်း ..... ချစ်ပါတယ်"
" ခဏလေးပဲနော် " လက်လေးကလွှတ်တော့မသွားဘူးဗျ အဲ့တာနဲ့ ရှေ့ဆက်တိုးရတော့တာပေါ့ ကျုပ်လက်လဲအထဲရောက်ရော ၈ တန်းအရွယ်ဆိုတော့အမွှေးလေးတွေက ပေါက်ခါစ လေးနုညံ့နေတာပဲ အဖုတ်လေးကတော့ဖောင်းနေတာပေါ့ အပျိုအဖုတ်လေးကိုး အဖုတ်ရဲ့ကြားထဲကို ကျုပ်လက်လခယ်လေးနဲ့အသာစမ်းပီး ပွတ်ပေးလိုက်တယ်ဗျ စောစောထဲကထွက်နေနှင့်တဲ့အရည်ကြည်လေးတွေနဲ့ဆိုတော့ ပွတ်ရတာအဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာ အဖုတ်ရဲ့ထိပ်ကအစေ့လေးကလည်း တောင်လာလိုက်တာ ကျုပ်လက်ခလယ်ကို အကွဲကြောင်းလေးနဲ့အစေ့လေးကို ပွတ်ပေးနေလိုက်တာ ကောင်မလေးတော်တော် ဖီလ်းတတ်သွားတယ်နဲ့တူပါတယ် ကော့ကော့တတ်လာတာဗျို့ ကျုပလ်က်ကိုဆုပ်ထားတဲ့သူ့လက်ကလေးကလဲ တင်းတင်းလေးပိုဆုပ်လာတယ်
အဲ့တာနဲ့ပဲ နို့စို့နေတာ နေတာရော နဒီအဖုတ်လေးကိုပွတ်ပေးနေတာကော ခဏရပ်လိုက်တယ်ဗျ ကျုပ်လက်ကိုအသာပြန်ထုပ်ပီး သူ့လက်လေးကိုကျုပ်ရဲ့အသင့်ပြေကျနေတဲ့ပုဆိုးအောက်ကညီလေး ဆီကိုကိုင်ခိုင်းလိုက်တယ် သူ့ရဲ့ကိုယ်လုံးလေးပဲကျုပ်ရင်ခွင်ထဲမှာရှိတော့တာ အောက်ပိုင်းကကျုပ်ရှေ့မှာ ဆိုတော့ ကျုပ်ညီလေးနဲ့သူ့လက်နဲ့ကကွက်တိ အစတော့ကြောင့်သွားတယ်နဲ့တူပါတယ် လက်ကိုပြန်ရုတ်လိုက်တယ်ဗျ သူ့ကိုရမက်ခိုးတွေဝေနေတဲ့အကြည့်နဲ့တချက်ကြည့်ပီး အသားလေးပြန်တင်ပေးလိုက်တော့ဆုပ်ထားတယ် အဲ့တာနဲ့ သူ့လက်လေးကိုကိုယ်ကကိုင်ပေးပီး ညီလေးကိုဂွင်းတိုက်သလိုလုပ်ပေးလိုက်တယ် " နဒီ အဲ့လိုလေးလုပ်ပေးနော် "
" အွန်း "
" ကို့ကိုချစ်လား " " ချစ်တာပေါ့ ကို ရယ် "
သူ့ရဲ့အသံတွေကတုန်ပီးမောနေတဲ့အသံမျိုး အဆင်ပြေပီဆိုတော့ကျုပ် နဒီ့ ရဲ့အဖုတ်လေးကို ပြန်နှိုက်ရတော့တာပေါ့ ခုဏကထက်အရည်လေးတွေများနေတော့ အဖုတ်လေးကကိုင်လို့ကောင်းနေသလိုလို " နဒီ လှဲလိုက်ပါ့လား ကို့ပုဆိုးခင်းပေးမယ်လေ "
" ကိုကလည်း ဘာလုပ်မှာလဲ "
" လှဲလိုက်ပါ နော် "
သူလှဲပေးလိုက်တဲ့ ဖောင်းကြွနေတဲ့ကိုယ်လုံးလေးပေါ်ကိုကျုပ်ကလည်းအလိုက်သင့်လှဲပီး ဘာမှမပြောနိုင်အောင် ပါးစပ်ကိုငုံ့ပြီးနမ်းလိုက်တဲ့အခါ ကျုပ်လေပျော်လိုက်တာ မိန်းမတယောက်ကိုတကယ်လုပ်ရတော့မှာပေါ့ ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ပထမဆုံးအခါဆိုတော့လဲ တုန်နေတာဗျ ကျုပ်ဒူးတွေပြောပါတယ် သူ့ပင်တီလေးကိုအသာလေးချွတ်လိုက်တော့ " ကို့ ဘာလုပ်မို့လဲ အဲ့လိုကြီးမလုပ်ပါနဲ့ နော် "
" နဒီ ကလည်းတစ်ခါထဲပါနော် နော် "
" ကို ကလည်းအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကွာ "
" အင်းအင်း ခဏလေးပဲနော် "
" ကို မဆိုးနဲ့ကွာ "
" နဒီကလည်း တစ်ခါတည်းပါနော် "
" နဒီ ကြောက်တယ် မလုပ်ပါနဲ့နော် "
" မကြောက်ပါနဲ့ ကို ကနဒီ့ကိုယူမှာပဲလေနော် လုပ်ပါကွာတစ်ခါတည်းပါနော် မကြောက်နဲ့နော် "
" ကို ကလည်း" ငြင်းသာငြင်းနေတာ အဖုတ်ကအရည်တွေရွဲနေပြီ မိန်းမတွေများတယ်ခက်သားဗျ ကျုပ်လဲ ပြောပြီး နဒီ့ နို့လေးကိုကုန်းစို့နေလိုက်တယ် လက်ကတော့ ပင်တီလေးကိုအောက်လျောပီး ထဘီလေးကိုအပေါ်ဆွဲတင်နေတာ ခါးထိလဲရောက်ရော အသာလေး သူ့ပေါင်ဖြူဖြူလေးနှစ်ဖက်ကြားထဲကို ကျုပ်နေရာဝင်ယူရတာပေါ့ ကောင်မလေးထပ်ငြင်းမှာစိုးလို့ နို့စို့နေတာရပ်ပီး သူ့နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို လှမ်းစုပ်လိုက်တယ်ဗျ အဲ့တော့မှအဆင်ပြေသွားတယ် သူ့ဒူးလေးနှစ်ဖက်ကိုအသာမပေးလိုက်တယ် သူကလည်းအလိုက်သင့်လေးပါလာပါတယ် ပီးတာနဲ့ ကျုပ်လီးရဲ့ထိပ်နဲ့ သူ့အဖုတ်ရဲ့အကွဲကြောင်းလေးတလျောက် ပွတ်ဆွဲပေးနေတာ ကောင်းမလေးဖီလ်းတွေအတော်တတ်လာတယ်ဗျ ခန္ဓာကိုယ်လေးကကော့တတ်လာပီ ကျုပ်ကိုအောက်ကနေတင်းတင်းဖက်လာတယ် အဆင်ပြေပီပေါ့ သွင်းဖို့ကြိုးစားရတော့တာပဲ သူ့အဖုတ်ဝလေးကိုလက်နဲ့တေ့ပီး အသာလေးကော့ထိုးလိုက်တာ ကောင်မလေးတွန့်သွားတယ်ဗျ ဒေါ့ကီမပြောနဲ့ အခုလုပ်နေတဲ့ လှေကြီးထိုးနည်းလည်းကျုပ်ကကြိုက်တယ်ဗျ ကျုပ်လည်းဆက်သွင်းရတာပေါ့ တော်တော်နဲ့မဝင်ဘူးဗျ လူကရှေ့ကုန်းနေလို့လားမသိ
အဲ့တာနဲ့ နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်နေတာကိုရပ်လိုက်တယ် ကိုယ်ကိုပြန်မက်ပြီး လက်တစ်ဖက်ကကျုပ်လီးကိုကိုင် တစ်ဖက်ကသူ့အဖုတ်လေးကို လက်ညိုးနဲ့လက်ခလယ်သုံးပြီးဖြဲလိုက်တော့ နဒီ က " ကို ဗိုက်ကြီးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟင် "
" စိတ်ချမကြီးစေရပူးနော် ကြီးတော့လဲကို က နဒီ့ကို ယူမှာပဲဟာ "
ကျုပ်လီးနဲ့ သူ့အဖုတ် လေးကိုသေချာပွတ်ပေးလိုက်တယ် နဒီကတော့ကောင်းနေပြီနဲ့တူတယ် မျက်လုံးလေးကိုမှိတ်ထားတာဗျ ကျုပ်လဲ သူ့အဖုတ်လေးကိုနဲနဲဖြဲပီးတော့ ကျုပ်လီးကိုဝင်အောင်သေချာတေ့သွင်းလိုက်တာ " အာ့ ... ကို နာတယ် "
" ခဏလေးပါ ပြီးရင်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်နော် "
ဒစ်မြှပ်ရုံလောက်လေးဝင်သွားတာဗျ ကောင်မလေးကလည်း နာလို့လားမသိ တွန့်နေတာပဲ ကျုပ်ကလဲ ဘယ်ရလဲ ဆက်သွင်းတာပေါ့ " အား ... ကို့ ......နာတယ် ..အား "
" ခဏလေးပါ နဒီရယ် ခဏလေးအောင့်ခံလိုက်နော် ခဏနေရင်ကောင်းမှာပါ "
" အာ့ .. ကို့ မရဘူး နာတယ် ပြန်ထုတ်ရင်ထုတ်လိုက်ပါနော် အာ့.."
ကျုပ်ကလည်းမရဘူး သူအော်လေနှဲ့နှဲ့ပီးထည့်လေပဲ တဝက်လောက်ဝင်သွားတော့ ရှေ့မှာတင်းတင်းလေးနဲ့ တခုခု ခံနေသလိုကြီးဗျ ကျုပ်လည်းကြားဖူးနာဝအရဒါအပျိုမှေးပဲဖစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ ခပ်ဆက်ဆက်လေး ဆောင့်ပေးလိုက်တယ်ဗျ " အာား ကို့ အား အား"
ကျုပ်လဲ ဖြေးမနေတော့ဘူး ဆက်တိုက်သုံးချက်လောက်ဆင့်ဆောင့်ပြီး လီးအဆုံးဝင်သွားတဲ့အထိသွင်းလိုက်တယ် ခဏလောက်အဆုံးထိထည့်ထားပီးမှ တဝက်လောက်ပြန်ထုတ်ပြီး လီးကိုကြည့်လိုက်တော့သွေးစလေး ကပ်ပါလာတယ်ဗျ ဟ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲပျော်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်း ကျုပ်ဘဝမှာမိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့အပျိုမှေးကိုပထမဆုံးအကြိမ် လီးနဲ့ထိုးခွဲရတာဆိုတော့ မပျော်ဘဲနေမလား ခင်ဗျားတို့ပဲစဥ်းစားကြည့် ကြာကြာမပျော်နိုင်ပါဘူး လုပ်ရမယ့်ဟာကရှိသေးသကိုး ကျုပ်လဲအဝင်ချောနေပီဆိုတော့ဆောင့်တော့တာပေါ့ " ကို့ အားးစ် ..... အာ့ ...အား "
" နဒီ ကောင်းလား "
" ဟာ ဘာတွေမေးနေတာလဲ အာ့.. "
အဝင်ကအတော်ကောင်းနေပီဗျ ကျုပ်ကလည်း လက်တဲ့စမ်းချင်နေတဲ့အကောင်ဆိုတော့ ရှယ်ဆောင့်ပြီးလိုးပေးနေတာ " နဒီ အောက်ကနေ အဖုတ်လေးကိုကော့ပေး "
" ဟုတ် အာ့ ... အားးး "
နဒီကတော်တော်ထန်နေတယ်နဲ့တူတယ် အောက်ကနေသူ့အဖုတ်လေးကိုကော့ပေးတာ တကယ်ကိုကောင်းတာဗျို့ " နဒီ နာသေးလား "
" အင်း သိပ်မနာတော့ဘူး နဲနဲတော့အောင့်သလိုပဲ အာ့ အား အား ကို့ တအားမဆောင့်နဲ့လေ အာ့ အား အား အား "
" နဒီ ပဲမနာတော့ဘူးဆို နဲနဲမြန်မြန်ဆောင့်မယ်လေနော် "
" အင်းအင်း တအားတော့မဆောင့်နဲ့နော် အာ့ အားးစ် အားးးးးး အားး "
" နဒီ ကောင်းလား " " အင်း ကို့ မရပ်နဲ့ဆောင့် "
သူကိုကကောင်းမှန်းသိပီးတောင်ဆိုလာမှတော့ ကျုပ်တို့ကလက်မနှေးဘူး အပီကိုခပ်မြန်ြမန် ဆောင့်လိုက်တာ " အာ့ ကို့ အားစ် အား အား"
" အာ့ အာ့ အား အားးစ် အားးးးးး "
နဒီ ပြီးသွားတယ်နဲ့တူတယ် သုံးချက် လောက်ကော့တတ် လာပြီးငြိမ်ကျသွားတယ်ဗျ (Page ကစာလုံးရေများတာလက်မခံလို့ ခွဲတင်ထားပါတယ်နော် )
Thanks given by: Maug Gyi , 1411crab , ဆြာသြ , calebet , Zyar6969 , kozawgyi666@gmail.com , evercopy , thecaveman